Downloads 39 056
Mpanoratra: SkySpirit2011, Alrot, natontan'i Enrique Cornejo, novaina & napetraka tao amin'ny Rikoooo, repoblikan'i Air Force One nosoratan'i Dagobert
Nohavaozina taminy 01 / 08 / 2018: Nasongadin'ny 3D modely (SSPX2012-748V4_GENX.mdl 2012 -> 2016), tontolon'ny horonantsary vaovao ho an'i Air Force One (avy Dagobert), sary vaovao vaovao vaovao, FDE (Aircraft.cfg sy 747-8GEnx.air), nampian'i V-Speed panafody, nampiana fitaratry ny fitantanana Ground, famatsiam-bola GPWS, fitomboana matanjaka sy realistika amin'ny sidina. Prepar3D v4.3 Kompatibel
Air Force One dia ny antso famantarana ny misy voromby ny Air Force ny Etazonia izay dia ny Filohan'ny Etazonia.
Hatramin'ny 1990, ny filoham-pirenena dia ahitana andian-tsambo 747 Boeing roa ampy fitaovana manokana, ary nohavaozina ka ny filoha sy ny ekipany ary dia afaka soa aman-tsara mandroso flexibly foana raha mifandray ny sivily sy ny miaramila ny mpitarika mba hahatonga fanehoan-kevitra tsy tara ny krizy.
Izany dia manome ny B747 ny payware virtoaly cockpit fijery ary ankehitriny amin'ny hoditra maitso tapestry teo amin'ny lafiny roa amin'ny seza. Izany mihitsy aza manana fitaratra palitao mihantona amin'ny aoriana ny cockpit. Ny panel.cfg sy ny aircraft.cfg no nivory sy natontan'i ny Flightsim Atrikasa Team.
Ankehitriny dia afaka miseho ny "ny sary masina" varavarankely ao amin'ny virtoaly cockpit mba mora tonga ny manaraka varavarankely: GPS, avionics, Map, ATC, climb / onjam-peo altimeter / mpandringana jiro, Auto-fiatoana jiro, throttle quadrant, famantaranandro, descentometer, kneeboard ary ambony tontonana. Endri-javatra vaovao ao amin'ny ny sary masina varavarankely dia pitot hafanana miaraka amin'ny jiro sy eny endri-javatra (XML habetsahan'ny avy Enrique Cornejo).
Ny Tsy Mifantoka amin'ny Switches dia manana jiro maitso, izay manao azy ireo hijery zava-misy bebe kokoa. Center ATC famantarana amin'ny fiaramanidina ity dia ny "Boeing 747 Air Force One". Ny toerana ny Anie jiro efa raikitra. Ny cockpit jerena avy amin'ny mpanamory ny fanaovam-panavotana dia izao aina kokoa satria lavitra ny seza Lava. Ny fiaramanidina dia manana fomba fijery sy ny maotera vaovao VC vaovao fomba fijery anatiny. Ny freins manana Differential freins rafitra mba ho malama hifandimby eo amin'ny tany. Ny Air Force One mihasimba dia mahatalanjona sy Professional textures ny tsy fantatra, izay ahitana tsipiriany, tena setroka ao amin'ny efatra fitaovana, trano fialan-tsasatray kokoa fomba fijery, zava-misy feo sy zava-misy kokoa alina VC jiro sy ny fuselage textures alina.
Nihatsara ihany koa ny paikady soleil, ka miova ankehitriny. Io fiaramanidina io dia mampiasa ny Tetikasa Open Sky FSX Boeing B747-800 modely OSX748V4_GENX (MDL), ary ahitanao ny rindranasa fenona Posky Utility mba hijerena ny tohatra fototra, ny fiasan-tsolika ny tany, sns. Ny feo môtô dia nohavaozina toy ny tena misy miaraka amin'ny cockpit ambient. Ny Computer Management (FMC) dia miorina ary toy ny fitaovana mandoitra. Ny VC dia ahitana FMC, Fampisehoana Flight Primary (PFD) sy Multi-Function Display (MDF) aseho amin'ny halehibe. Ny kabine virtoaly ihany koa dia manana rafitra fanoroana fitaovana sy fanamafisam-peo antsoina hoe EICAS, rafitra fitsinjaram-pahavoazana ho an'ny manodidina (GPWS), mpitrandraka arak'asa, jiro kabinetra, fanakanana afo, fiaramanidina avionika, fiaramanidina.
Azonao atao ihany koa ny mahita solomaso fantsona, fikolokoloana fiarakaretsaka, mpamolavolan-tsolika, APU mpamolavola, fiantohana fiara, fantsom-pifandraisana, de-ice switch, alam-bolana. Ny tarehin'ny famantaranandro dia mavomavo ankehitriny izay mahatonga azy ireo ho tsara kokoa sy mora hita. Natambatra sy novaina FSX avy amin'ny mpanamory ny Workim Workshop Enrique Cornejo.